WordPress Kubata Kumhanya Kunonoka? Enda kune Managed Hosting | Martech Zone
WordPress Kubata Kumhanya Kunonoka? Enda kune Managed Hosting
Wednesday, May 6, 2020 Chipiri, Gunyana 27, 2020 Douglas Karr
Kunyangwe paine matani ezvikonzero ekuti yako WordPress yekumisikidza iri kufamba zvishoma (kusanganisira zvisina kunyorwa plugins uye madingindira), ndinotenda chimwe chete chikuru chikonzero nei vanhu vaine matambudziko ndeyeye yavo yekutambira kambani. Iyo yekuwedzera kudiwa yemagariro mabhatani uye kusanganisa inosanganisa nyaya - mazhinji acho anotakura zvinotyisa zvakare.
Vanhu vanoona. Vateereri vako vanoona. Uye havashanduki. Kuva nepeji inotora nguva yakareba kupfuura masekondi maviri kutakura kunogona kuwedzera huwandu hwevashanyi vanosiya yako saiti… kana zvakatonyanya… yekutengera yako. Nechikonzero ichocho, zvakakosha kuti iwe ushande mukuvandudza yako kumhanya.
Zve WordPress, takatamira ku Flywheel uye ndakave nemhedzisiro inoshamisa. Yedu saiti inogara yakakwira 99.9% kana yakakwira (uye kana isiri, ndizvo chaizvo isu tinoshanda pairi). Ivo vane zvese zvakakosha zvivakwa uye maturusi maturusi ekuti agadzirise yako saiti - kana ese ako evatengi 'saiti - zviri nyore kwazvo:
1-Dzvanya Kudzosera - Instant negadziriro yeparutivi uye kudzorera pamwe nyore Snapshot Backups
Sisitimu Zvimiro - Iko kugona kubata vatengi mukati mekambani yemutengi
Zvirongwa - Sevha theme saiti uye mapulagi seyakajairwa tsika iwe yaunogona kushandisa kuvaka mapurojekiti emangwana.
Caching - Caching tekinoroji yehukuru hwekukwanisa uye kumhanya.
CDN Yakagadzirira - Blazingly inokurumidza kutakura nguva yezvinhu zvemukati.
Cloning - Iko kugona kuenzanisa saiti zviri nyore.
Mazuva ese Backups - Automated, redundant masisitimu ekutsigira ako akakosha kunyorera.
firewall - Akawanda, ane simba firewalls pakati pe data rako nekunze kutyisidzira.
Malware Scanning - Proactive kuona uye kubvisa malware ane ngozi.
tsigira - naka tekinoroji rutsigiro kubva kuUS-based WordPress nyanzvi.
Free SSL - Gonesa SSL pamasaiti ako ese.
Staging - Iko kugona kuumbana uye kushanda mukati medanho nzvimbo, wobva wasundira live.
Chii chinonzi Managed WordPress Hosting?
Isu takatama pamusoro pevatengi makumi mashanu kuenda Flywheel kuyambuka pasina kana pasi pemakumi mashanu eWordPress kumisikidzwa, uye zvese zvaenda mushe. Uye Flywheel ndiwo yakakurudzirwa kuitirwa neWordPress!
Oo, uye ndataura here kuti Flywheel ine yayo yako wega kutama plugin?
Zvikonzero zvakakosha zvekutamira kune Flywheel dzinosanganisira:
WordPress Tsigiro - Ini handigone kukuudza iwe nguva dzese dzatakamhanyira mukati nemasevhisi uko kwavakapomera zvakananga WordPress nebakoat iyo yaisatsigirwa (kunyangwe vaigara vaine 1-tinya kuisa). Nyaya dzemvumo, nyaya dzekuchengetedza, nyaya dzekuchengetedza, nyaya dzekuita… iwe unozvitumidza zita, isu takamhanyira mariri uye wese muenzi akapomera WordPress.
Sangano Rutsigiro - mukana wakakura wekuti mutengi ave muridzi weakaundi asi isu tinowedzerwa sevashandisi vane mvumo, vashandisi vanobvumirwa nevatsigiri, uye vanobvumidza vashandisi veFTP. Kana mutengi akatisiya, vanogona kuramba varipo Flywheel uye ramba uchibudirira. Hapanazve kubata vatengi kubatwa kana kuve nenguva isina kugadzikana yekufamba.
Mari dzekubatana - Pese patinosaina mutengi neFlywheel, tinoshandisa Flywheel. Isu takavhurika uye takatendeseka nevatengi vedu kuti tinoita mashoma emari kubva pachibvumirano… uye sezvo isu tisingabhadharise kutama kwavo, havana kana hanya nazvo.
Cloning - iko kugona kusonamira saiti ingori inonakidza. Hatichafanirwi kutora nharaunda yekumisikidza kumwe kunhu tobva taiendesa kumugadziri, Flywheel takavakirwa mukati chaimo. Isu tinokwanisa kuratidza mutengi kufambira mberi, ngavapinde uye vatore iyo yekuyedza drive, uye isundire irarame nekungobaya bhatani bhatani.
Backups - Michina kana 1-tinya backups uye kudzoreredza zvave naka. Isu tanga tine mutengi anga achiyedza bato rechitatu-bato uye pese panoti wechitatu-bato vagadzirira kuenda kunogara, isu taizoenda kunorarama zvikatadza. Isu takakwanisa kudzoresa ipapo saiti yapfuura nenyaya yemasekondi kudzamara vagadzirisa zvivakwa zvavo kudiwa.
mutambo - dombo rakasimba caching uye huru yemukati yekuendesa network yakachengeta vese vedu vatengi vachiita nemazvo. Fast nzvimbo dzinovandudza shanduko metric uye kunyangwe yekutsvaga injini chinzvimbo ... chinhu chakakomba chinhu chatisingafanire kunetseka nezvacho.
WP Cache - pamusoro peiyo Flywheel's cache injini, ivo zvakare vanotsigira zvizere WP Cache uye WP Rocket pfekera. Iyo plugin isinganzwisisike - ine usimbe mutoro kugona, minification, kuunganidzwa, database yekugadzirisa, uye pre-cache kugona. Iyo plugin yakakodzera kuisa mari mairi!
WordPress Security - hunyanzvi hwekubira hunyanzvi hunogona kukanganisa shanduro dzekare dzeWordPress kana madingindira asina kunyorwa uye plugins. Flywheel inoongorora yako vhezheni uye inovimbisa yako saiti haina mukana sezvo isu tichiona vamwe vanhu 'vatengi vachienderera mberi kubiwa. Gogodza huni, hatina kumbove nenyaya. Uye tinozvida izvozvo Flywheel ichavandudza shanduro kana paine njodzi chengetedzo.
Staging - Flywheel ine yakasimba staging kugona kwavanogona kugonesa pane chero ewawebhu saiti, ichikugonesa iwe kuumbiridza saiti yako kunzvimbo yekuratidzira, kugadzirisa iyo yakarongedzwa saiti, uye kuisundira iyo kumashure kuti irarame kana wagadzirira. Icho chishandiso chinoshamisa icho chinofanirwa kune chero munhu anotarisa kuti aite zvakakosha kuvandudza kune yavo saiti - sekusimudzira kune nyowani dingindira.
Kana izvo zvisina kukwana, Flywheel vakagadzira yavo yekuendesa application inonzi Yemunharaunda. Iko kunyorera kunogonesa vanogadzira ku:
Gadzira saiti munharaunda nekamwe chete!
Gadzira uye uratidze mutengi wako kuburikidza nedemo URL
Dhinda kuna Flywheel nekungodzvanya kamwe chete (uye zvinongoshanda)
Takave nerubatsiro rwe Flywheel mainjiniya pane dzinoverengeka nyaya zvatova. Isu takave nenzvimbo dzakabiwa uye timu yavo yakaunzwa nyanzvi dzekuchengetedza kuti vaone iyo nyaya (kazhinji plugin) uye vozvigadzirisa. Isu takave nenzvimbo dzakambove nenyaya dzekuita idzo timu yavo (uye interface) dzakatibatsira kugadzirisa nekugadzirisa. Tave nenzvimbo dzakatora masekondi gumi kurongedza pane mamwe mauto ayo anotakura mukati memasekondi maviri pairi Flywheel.
Uye hazvisi zvedu chete zvirevo. Isu takagovana kubudirira kwedu nemamwe masangano, uye ivo vakatamisa vese vatengi vavo kuenda kune Flywheel. Sarudzo yakasarudzika neWordPress iri kubvumira vatengi vako kuti vatenge chirongwa uye wobva wawedzera timu yako sevashandisi vane mvumo. Izvi zvinokutendera iwe kukumbira rutsigiro pachinzvimbo chavo uye maneja mushandisi uye SFTP kuwana - zvese nepo mutengi aine yake account. Ipa vatengi vako kodhi yako yekubatana uye Flywheel ndichadaro kubhadhara iwe.
Iko kunovandudzwa kwekuita kwekuvandudzwa kwakabatsira kudzikisa mabhureki emitengo, kuwedzera nguva pane peji, uye - nekuda kwekuvandudzwa kwespidhi kumhanya - kwakatibatsira kuwana inoshamisa yekutsvaga injini kuoneka. Ah… uye hongu, zvinongedzo mune ino positi ndezvedu zvemubatanidzwa zvinongedzo.
Mamwe WordPress Anogadziriswa Ekupa Vanopa
WordPress Managed Hosting inozivikanwa inozivikanwa yakapihwa WordPress 'yakakura kutorwa. Kune mamwe makuru makuru muiyo indasitiri uye isu tashandisa ese ese:
WPEngine - ikozvino muridzi weFlywheel! WPEngine ine zvimwe zvakagovaniswa zviwanikwa asi ine zvimwe zvakasarudzika maficha. Imwe yataida kune mutengi yaive yekugona kurodha pasi yekushandisa mafaira ekutevedzera.
Kinsta - anga achigadzira mamwe mafungu akakura muindasitiri nekuda kwezvivakwa zvavo zvinoshamisa. Vanomhanya dzimwe nzvimbo dzinokurumidza zvinoshamisa kune mamwe mabhuru makuru kwazvo.
Tags: imwe nzira kune wpenginebest hostingkubhururukaflywheel yemunoyemahara sslsimbe mutoroyemuno wordpress yekuvandudzavakakwanisa wordpress hostingWordPresswordpress mabhakitiWordpress cachingWordpress cdnWordpress database kugadzirisaWordpress kuvandudzaWordpress firewallwordpress hostingWordpress malwareWordpress sslkudhinda izwikutsigira kwemashokowpcachewpenginewpengine hosting
Yanhasi SERP: Kutaridzika Kutarisa paGoogle Mabhokisi, Makadhi, Akapfuma Snippets, uye Mapaneru
Aug 26, 2011 na1: 14 PM
Ndakavatarisa kunze asi dambudziko rangu rizere nezvose izvi zvakaitirwa WordPress zvitoro ndezvekuti iwe unofanirwa kusiya chinhu chekutonga chisingagamuchirike kwandiri. Kumhanyisa webhusaiti hombe kunoda kuti ndive nekutonga kwakazara pane zvese zvinhu - zvinosanganisira plugins uye kuwana dhatabhesi. Mapakeji avo emitengo zvakare haanzwisisike muchokwadi - $ 100 / mwedzi ye250k peji rekutarisa uye 100gb? Uyu muganho wekupokana wandinogona kurova mumasvondo maviri kusvika matatu. Ndiri kushandisa Media Tembere (uye ndichiibhadharira yakawanda) - uye kushandisa chishandiso chega chega 'chekusimudzira' (cahcing, CDN, nezvimwewo) zviripo handikwanise kutakura nguva zvirinani kupfuura masekondi 2-3. Iyo poindi yandiri kuyedza kugadzira ndeyekuti hapana sirivheri bara kana zvasvika pakutora WordPress kumhanya nekukurumidza. Ndakavaedza vese.
Aug 26, 2011 na5: 25 PM
Iwe unogona kudzora ese maficha navo, Jonathan. Saiti yedu ine toni yekugadzirisa uye mapulagini kuti iite kuti iite zvese zvatinoda. Ini ndinotenda mutengo uri wakanaka kune avhareji yemakambani blog ... munhu wepakati haazive maitiro ekugadzirisa maCDN uye caching saka izvi zviri chaizvo pasi pemutengo iwoyo. BTW: Isu tinoshandisa Mediatemple futi… ine CDN uye Cloudflare uye haisi kungoitawo sezvataida.
Sep 14, 2011 na5: 29 PM
Uri kuitisa iyo saiti yeWordPress paMedia Temple's grid server kana yakatsaurwa chaiyo server? Ini ndaive neyakareruka saiti yakachengetwa ne (mt) yemakore maviri pane iyo gridhi uye nguva dzekuremerwa zvaingova zvinotyisa, zvinoseka nekunonoka uye iyo admin nzvimbo yaingove marwadzo anorwadza mudhongi. Ndakataura here nezvechiitiko chose chaityisa?
Ndakaita zvese zvinobvira pasi pezuva kugadzirisa yangu saiti kunze kwekutenga grid mudziyo uye hapana chakashanda. Ndakaigadzirisa ine minify, WP Super Cache, nezvimwewo ini ndakamboedza kushandisa CloudFlare pane imwe wp yakachengetwa saiti asi nguva dzekutakura dzinosetsa. Masekondi makumi maviri kurodha peji repamba?
Ndakafunga kuendesa saiti yangu kuHostgator uye nekukurumidza kumhanya kwakapetwa katatu nehusiku. Ini ndichiri kupotsa iyo (mt) control panel inova isinganzwisisike asi kumhanya kwesaiti yangu kuridza chimiro chinotaridzika.
Iye zvino ndiri kushanyira webhusaiti nyowani zvakare asi panguva ino ini ndoda kuisa multisite nekwanisi yekugamuchira gumi maidhi masosi mukati mayo. Ndanga ndichitarisa (mt) yakatsaurwa chaiyo, WP Injini uye Peji.ly. Media Tembere inoratidzika kunge iri nani chibvumirano uye ini ndanga ndatopiswa navo pa grid, asi ndinoshamisika kana yavo yakazvipira chaiyo ichandipa iyo yekumhanyisa yekuwedzera ini yandinoda uye kunyevenuka kwekushandisa kunouya neyavo ekutonga mapaneru.
Sep 14, 2011 na7: 09 PM
MT ingori "chibvumirano" kana iwe uchida muchina pasina chero chaiyo rutsigiro rweWordPress. Kana iwe uchida kuita chengetedzo pachako, mhanyisa pachako, kuzvikurisa iwe, CDN iwe (uye ubhadhare iyo).
Uyezve pane kukwirira-kuwanikwa. Zvese zviri zviviri nekuda kweesoftware uye zvematambudziko, kumisikidza-server kumwe chete hakugone kuve kwakanyanya-kuwanikwa sekisumbu.
Mukuona kwedu, kuyedza kuchengetedza $ 20 / mo asi uchifanira kuita zvese izvo zvinhu pachako hakusi kushandisa kwakanaka kwenguva kana mari. Zviri nyore kwatiri nekuti isu tinoisa mari yezvinhu zvese pamusoro pevatengi vedu; zvakangowandisa kuti ungwarire kune imwe chete saiti yekuita kana usiri TechCrunch.
Sep 14, 2011 na7: 38 PM
Ndatenda Jason. Ndiri kukutorerai vamwe vanhu ruzivo kuburikidza nesaiti yako kuti uwane mutengo.
Aug 26, 2011 na6: 17 PM
Hi Joanathan, ndinonzwisisa kwauri kubva, asi hauna kuzviedza zvese izvi kana usati watiedza. 🙂
Iyo miganho igwara - isu hatidzime saiti yako kana chero chinhu kana iwe ukairova, zvinongoreva kuti zvinotipa isu zvakanyanya uye zvinokubhadharira iwe zvakare. Tinogona kutaura nezvazvo.
Isu takave nevanhu vazhinji vasingakwanise kukwidzirisa kupfuura imwe pfungwa, asi wozoona kugadzirisa pamwe nesu. Nekuti: http://wpengine.com/our-infrastructure .
Zvakare, isu * tinokupa iwe kutonga pamusoro pemapulagini, kodhi yekodhi, uye kuwana dhatabhesi, saka usafunge kuti tichakukiyira kunze!
Pane kudaro, wadii kutipa mukana ... fambisa kopi yako blog, wozonditumira email (jason ku wpengine) uye ngatione zvatingaite.
Gumiguru 9, 2011 na11: 42 PM
9-10 masekondi haagamuchirwe. Ini pachangu ndakawana switching kubva kuThesis kuenda kuWoo fomati yakaita kuti saiti yangu inononoka. Ini ndanga ndichirodha kumasekondi matatu uye ikozvino nzira yacho inononoka.
Ndakawana VPS iri nani zvakanyanya pane kugoverana kugovera uye kutamisa masosi akati wandei kuMT inova gimmick uye kunetsekana mumaonero angu pamwe nekudhura zvakanyanya
Unogona kuwana VPS neCPanel yemadhora makumi matatu nemashanu pamwedzi uye yakachipa pamapakeji egore rega. Yakachipa zvakare yeVPS nePlesk
Gumiguru 1, 2012 na1: 52 PM
Mhoro Brad… Kana iwe usina basa nekubvunza .. waiwana kupi "VPS neCPanel yemadhora makumi matatu nemashanu pamwedzi"
Icho chiri paMT here? Iwe unoti wakafambisa nzvimbo dzinoverengeka ipapo asi chii chinonzi gimmick yavo? Uri kufara navo here?
Ndiri kuvhiringidzika nemashoko ako.
Aug 26, 2011 pa 11: 08 AM
Asingazivikanwe, ndinofunga uchawana vanhu ava vakasiyana zvakasiyana. Kutanga, iwe une SFTP yekuwana kuitira kuti iwe ugone kuita shanduko iwe yaunoda parutivi rwe plugin. Sezvo iwe uine yakazara faira kuwana, iwe unogona kuita chero chaungade ne database. Iniwo, ndiri paMediaTemple uye ndiri kushandisa caching uye CDN… asi iwe neni tiri rudzi rwusingawanzo. Kana mumwe munhu asinganzwisise maitiro ekumhanyisa peji kumhanyisa, WP Injini ndiyo mhinduro kwayo sezvo vachinetseka nezve kuita kwacho saka haufanire. Iyo vhoriyamu yemapeji ekuona uye bandwidth kure inopfuura izvo zviri pakati pekambani blogger inoda. Dai iwe waizobhadharira nyanzvi yekuvandudza yako saiti uye kugadzirisa CDN, zvaizoda mari yakawanda, yakawanda.
Aug 26, 2011 na5: 01 PM
Akanaka ishe webhusaiti yako inotakura nekukurumidza.
Aug 26, 2011 na5: 14 PM
Kwete - asi zvichaita!
Aug 26, 2011 na5: 16 PM
Chaizvoizvo? Ndakafunga kuti watotama. Kana zvisiri, urikuita zvakanaka nekumhanya sezvazviri.
Aug 26, 2011 na5: 22 PM
Ini ndakatanga kushandisa Cloudflare - zviongorore, ibasa remahara uye rakabvisa mutoro kubva kumaseva edu ekugamuchira kuMediatemple. Haisi iyo inomhanyisa, asi kumhanya kwese kuri kuvandudzika nekuda kwayo.
Aug 26, 2011 na5: 50 PM
Zvikuru. Ini ndichafanirwa kuvaongorora. Sezvineiwo, chinhu changu chandaifarira cheWEPEngine pandakachitarisa kunze kwaisave kumhanya kana kugovera. Yakanga iri-bhatani staging. Zvinotapira sei izvozvo?
Aug 28, 2011 na1: 40 PM
Ini ndinofungidzira kuti chero chinhu chinosanganisira Jason Cohen chichava goridhe rakasimba. Ini handina kumbobvira ndave nechinodiwa cheCodeCollaborator yake, ndiri timu yemunhu-mumwe, LOL. Asi, ndanga ndichimutevera uye ndichidzidza huzivi hwake kweanopfuura makore maviri.
Paakatanga kunyora nezve WP Injini, ndakashamisika. Ehe, anozvidzokorora nguva nenguva uye ndiwo maitiro andapinda nhasi.
Sezvineiwo, ini pamwe handisati ndakagadzirira WP Injini, zvakadaro, saka ndichave ndichitsvaga muCloudFlare.
Sep 14, 2011 na5: 33 PM
Sekutevera kune iyi hurukuro - Ini ndakazopedzisira ndachinja kuitisa Anglotopia.net kuenda kuWpengine uye yangu saiti iri kumhanya zvakanyanya nekukurumidza. Ndiri kuchengeta iyo MT server kune mamwe masayiti uko nguva yekuremerwa haisi nyaya asi parizvino Anglotopia ndipo painofanirwa kunge iri.
Jun 26, 2012 pa4: 45AM
zvinodhura zvakanyanya kune imwechete saiti. Ini ndichaenda kune isingatarisirwe VPS panzvimbo. Ini ndichave nenzvimbo dzisingagumi uye caching masisitimu senge xcache.